Ukukhanya kweLed Track, ukukhanya kwe-Led Pendant-Pro.Lighting
Ukukhanya okuFluorescent okuQinisekileyo
Umphezulu weNtaba yokuKhanya
I-PRO.LIGHTING yasekwa ngo-1998, yasekwa eNanhai, kwisiXeko saseFoshan.Umzi-mveliso wethu ugubungela indawo ye-40,000 square metres.Sineendawo zethu zokusebenzela zokusonta, ukuphosa ukufa, ukubethelela, ukutofa umngundo, i-anodizing ye-reflector, kunye nokudibanisa ukukhanya kwe-fluorescent kunye nokudibanisa ukukhanya kwe-LED.
I-PRO.Lighting yasekwa ngoMatshi, ngo-1998.
OEM / ODMINKONZO
Ngaphezulu kwama-40,000 eemitha zesikweri sendawo yomzi-mveliso, kunye nezixhobo zokuvelisa eziphucukileyo zisinika amandla okwenza inkonzo epheleleyo yeshishini le-OEM/ODM kwaye siphumeze umgangatho ophezulu ekuhanjisweni kwexesha.
NgePRO.LIGHTING ecaleni kwakho, qiniseka ukuba uneqabane elifanelekileyo elinolwazi olutyebileyo kunye namava kushishino lokukhanyisa ukukhulisa ishishini lakho.Nceda uqhagamshelane nathi.
Ukulungiswa kokukhanya okuSiko
Iimveliso zethu zokukhanyisa isiko zisetyenziswa ngokubanzi kwihotele ephezulu, indawo yokutyela ekumgangatho ophezulu, iziko leshishini, iofisi, indawo yokuhlala, ikhefi, ivenkile, ivenkile enkulu nokunye.
Ukudala indawo yokukhanya ekhululekile kwaye eyonwabisayo kubomi bakho beshishini.Fowunela ukukhanya kwepro.
Ukukhanya okuPhantsi kwe-10029LED
Iwasha eludongeni SDL8005
UkuKhanya okuPhantsi 10073N
UkuKhanya okuPhantsi 10072N
Phantsi ukukhanya DL8003
Phantsi ukukhanya DL8005
Iwasha eludongeni DL8003
Iwasha eludongeni DL8005
Phantsi ukukhanya DL8006
Iwasha eludongeni DL8006
Phantsi Ukukhanya kwe-SDL8003
Phantsi Ukukhanya kwe-SDL8005
Iwasha eludongeni SDL8003
Iwasha eludongeni SDL8006
Onke amacandelo aphantsi kwe-IQC / OQC ezinzima.Inkqubo yonke ilawulwa ngokungqongqo
Izixhobo zovavanyo:Izixhobo zovavanyo oluphezulu
Izatifikethi: CE ziqinisekisiwe
siyayila kwaye sizama ukuba yeyona nkampani igqwesileyo kwaye sikubonelele ngeyona mveliso ilungileyo ukukwanelisa!
INgingqi yoShishino yaseShangan Guojia, idolophu yaseJinsha Danzhao, isiXeko saseNanhai Foshan, kwiPhondo laseGuangdong, eTshayina.
Indlela yokuphepha ukubola kokukhanya okukhokelela?
UPro.Ukukhanyisa kubhiyozela usuku lokuzalwa lwe-24
Ungayikhetha njani i-engile efanelekileyo yebhamu kuwe...
Ukuvalwa kweHolide yoNyaka oMtsha waseTshayina
Products Guide - iveliso ezifakiwe - Iithegi ezishushu - Imephu yesiza.xml
Isibane sePendant yanamhlanje, Ibala lokuKhanya, Ukukhanya, Led Spot, Isikhwebu Spot Light, Spot Light,